लास्टै हसाउने भाइरल सचिन परियारको यसरी भयो पहिलो गीतको सुटिङ , रबिनालाई सुटिङमै यस्तो भनेपछि Sachin -
Home News लास्टै हसाउने भाइरल सचिन परियारको यसरी भयो पहिलो गीतको सुटिङ , रबिनालाई...
लास्टै हसाउने भाइरल सचिन परियारको यसरी भयो पहिलो गीतको सुटिङ , रबिनालाई सुटिङमै यस्तो भनेपछि Sachin
नेपाल एक हल्लाको देश हो। यसको माने हल्ला हल्ला मात्र नभएर साँचो नै निस्कने भएकाले हो। २००७ सालपछिको इतिहास हेर्दा पनि यो प्रमाणित हुन्छ। जस्तो– २००७ सालमा राणा शाही जान्छ भनेर ठूलो हल्ला चल्यो। कतिपय राणा र समाजका गन्यमान्य व्यक्तिलाई यो कुरामा विश्वास थिएन। तर कालान्तरमा गयो पनि। २०१७ सालमा महिनौंसम्म नेपालमा प्रजातन्त्र रहन्छ कि रहन्न भन्ने हल्ला चल्यो।
दुईतिहाइको सरकारलाई कसले हटाउन सक्छ भन्ने एकथरीको तर्क थियो। तर त्यो हल्ला पनि सत्य निस्क्यो। २०३६ सालमा नेपालमा जनमत संग्रह गर्ने भयो। त्यसका लागि सबै प्रतिबन्धित दलहरूलाई खुलेआम काम गर्न दिइयो। तर यो केही दिनका लागि मात्र हो भन्ने हल्ला चल्यो। त्यो पनि सत्य निस्क्यो। २०४६ सालमा पञ्चायत व्यवस्था रहन्छ कि रहन्न भन्ने ठूलो सन्सनी थियो।
३० वर्षसम्म चलेको व्यवस्था कसरी जान सक्छ भन्ने मानिसहरूको अनुमान थियो। त्यो पनि भएरै छाड्यो। २०६३ सालमा जब देशव्यापी आन्दोलन चल्यो राजतन्त्र नै जान्छ कि भन्ने हल्ला चल्यो। हुन त राजतन्त्र नै हटाउने आन्दोलनको लक्ष्य थिएन। तर कालान्तरमा त्यो गयो। २०७६ मा आएर नेपाल भन्ने देशै रहन्न कि के हो भनेर हल्ला चल्न थालेको हो। अझसम्म पनि सो हल्ला कायमै छ।
सो हल्लाको पछि मानिस लाग्ने थिएन। तर नेपालमा हल्ला सत्य निस्कने परम्परा पाइएकाले कतै यो पनि सत्य निस्कने हो कि भन्ने मानिसहरूमा आशंका भएको हो। हुन पनि एउटा छिमेकीको गुप्तचर आएर प्रधानमन्त्रीसित सुटुक्क भेटेर जान्छ। अर्को छिमेकीको रक्षामन्त्री आएर दिनभरमा सबभन्दा धेरै समय नेपाली सेनासित बसेर जान्छ भने भित्रभित्र के भइरहेछ मानिसहरू अन्योलमा परेका छन्। यस्तो बखत एउटा संस्कृतको सूक्तिको स्मरण हुन्छ। त्यसमा भनिएको छ— एकं विषरसोहन्ति शस्त्रेणैकश्च बध्यते। स राष्ट्रं सप्रणं हन्ति राजानं मन्त्रविप्लव।। अर्थात् विषले एउटै मानिस मर्छ। त्यसैगरी हतियारले पनि एउटै मात्र मर्दछ। तर शासकका षड्यन्त्र खोलिँदा राष्ट्रका सबै जनता मर्छन्। कतै देशमा चलेको हल्ला र विदेशीसित भइरहेको भित्री गतिविधिको परिणाम निस्कँदा मानिसहरू कताबाट कता पुग्ने त होइन ? कसले भन्न सक्छ– भित्रभित्र यस्तो परिणामको षड्यन्त्र भइरहेको त छैन ?
Previous articleनेकपा फुटेपछि पहिलोपटक सार्वजनिक कार्यक्रममा ओलीको सम्बोधन, प्रचण्ड नेपालमाथि कडा प्र*हार Pm KP Oli
Next articleआमा गाउदा गाउदै बेहोस भइन छोरीको बिजोग, आमाछोरीको आजसम्मकै कारुणिक दोहोरी Riya Khadka Rati Khadka